CEEBEEY TACAAL: Saalax, Mane iyo Firmino waa EBER oo waxba iskuma hayaan marka ay ka horyimaadaan Manchester United…(Aqriso Xogtan) – Gool FM
CEEBEEY TACAAL: Saalax, Mane iyo Firmino waa EBER oo waxba iskuma hayaan marka ay ka horyimaadaan Manchester United…(Aqriso Xogtan)
Byare December 14, 2018
(England) 14 Dis 2018. Waa sax oo dood kama taagna in Maxamed Saalax, Sadio Mane iyo Roberto Firmino ay yihiin weeraryahannada ugu halista badan kubbada cagta adduunka ee waqtigaan balse waxba iskuma hayaan marka ay ka horyimaadaan kooxda Manchester United.
Reds ayaa axada Anfield ku marti qaadi doonta Manchester United xilli ay weeraryahanadeeda ay horyaalaan su’aalo adag oo laga doonayo inay ka jawaabaan.
Saalax, Mane iyo Firminino inay gool ka dhaliyaan Red Devils iskaba dhaafee xitaa caawin kuma sameyn kulamadii ay uga horyimaadeen horyaalka Premier League.
Dhaliyaha reer Brazil Firmino ayaa ah laacibka muddada ugu dheer jooga wuxuuna ka horyimid Man United 6-kulan oo Premier League 507-daqiiqo inuu wax gool ah ka dhaliyo iskaba dhaafee xitaa caawin kuma sameyn, inkastuu gool ka dhaliyay kulan Europe League ah xilli ciyaareedkii 2015-16.
Mane ayaa isna Man United la ciyaaray 180-daqiiqo waa labo kulan, wax gool iyo caawin kuma sameyn oo hal shuut oo qura ayuu ku tuuray mana ahayn mid uu goolka xitaa la bartilmaameedsaday.
Maxamed Saalax oo ah midka ugu waqtiga yar ayaa kooxda Jose Mourinho la ciyaaray 168-daqiiqo, gool iyo caawin midkood ma jiraan balse hal shuut oo qura ayuu la beegsaday goolka uu ilaaliyo De Gea.
Ku darso Liverpool wax guul ah kama gaarin Man United tan iyo 2015:
FIIRO GAAR AH: Sawirka qeybta dambe waa caawinta iyo goolasha ay dhaliyeen tan iyo sidii ay ugu soo biireen Premier League
Taageerayaal Careysan oo Cristiano Ronaldo ku bahdilay Baraha Bulshada kaddib Falkii uu sameeyay kulankii Champions League...(DAAWO)